Shan waxyaabood oo lagu xusuusan doono xukuumaddii Kheyre – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Shan waxyaabood oo lagu xusuusan doono xukuumaddii Kheyre
Allhadaaftimo July 26, 2020 Uncategorized
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa khudbaddii uu xalay ka jeediyay Muqdisho waxa uu ku sheegay in xukuumadda uu madaxda ka ahaa ay ku guulaysatay arimo muhiim u ah siyaasadda dalka.
Xasan Cali Kheyre ayaa nodqay ra’iisal wasaarihii ugu mudada dheeraa ee Soomaaliya soo maray burburkii kadib, isagoo xilka hayay ku dhawaad saddex sano iyo bar ama 1247 maalmood.
Qoraalka sawirka,Ciidanka Harmacad
Amni darrada (Qaraxii Zoobe)
Inkastoo bilihii u dambeeyay ee sanadkan uu soo hagaagayay amniga caasimadda Muqdisho ee ah xarunta dowladda Federaalka, ayaa haddana qaraxii ugu dhimashada badnaa maalin qura ah inta la ogyahay taariikhda Soomaaliya waxa uu dhacay intii uu xilka hayay ra’iisal wasaare Kheyre.
14-kii October 2017, xilli galabnimo ah ayaa gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee Muqdisho. Qaraxaasi ayaa galaaftay noolasha dad ku dhaw 600 oo qof, sida ay sheegeen hawlwadeennada caafimaadka ee caasimadda.
Ma jirin cid ka tirsan mas’uuliyiinta sarsare ee ammaanka oo xilka looga qaaday qaraxaasi dadka badan halaagay, gaar ahaan wasaaradda amniga.
Previous Xildhibaan Foosiya Waanu Ku Qanacsanahay Xilka Qaadista Raysal Wasaare Khyre
Next Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo soo gaaray Muqdisho